Toopphiyaan sammuu fi onnee uummata Oromoo keessaa baate jirti.
Eenyummaa fi maalummaa nama "Seye Abraha" jedhamuu kanaa, dhalawwan Oromoo keessaa gariin ni beeku. Garuu, inni harra obboleessi keenya obboo Kitaabaa Magarsaa nuuf dhiyeesse kun waan baay'ee akka yaadannu nu dirqisiisa. Anis namni kun oggaa EPRP keessa ture, warreen cimsaniitoo warra isaan "Narrow Nationalists" jedhaniin irratti, duula adeemsisaa turan keessaa isa tokko ta'uu isaa, karaa madda laallee amanamaatiin dhagayeen ture.
Namni kun isa ennaa san baanu, tiworii irratti dhiisuun nama adabatee taa'ee miti. Erga biyya keenya harree isaa ooffatee, kilaashoo isaa fannifatee, mootummaa fatansaa ("superpower") USA of duubatti abdateetoo daangaa keenya cabsee, biyya keenya harkatti galfatee waan inni loltuuwwan bilisummaa keenyaa fi dabrees uummata keenya irratti godhe ni beekna. Abbaa Duulaa warra Wayyaanee tuhuun akkuma obboo Kitaabaa Magarsaa jedhe, waan inni Oromiyaa Bahaa keessatti uummata keenya irraan gaye, Oromoota Barentuu ("Harargee") dhiisitii baala fi muka naannoo saniitu beeka. Kunoo barroon (kitaabni) namticha "CIA", isa Wayyaaneetti gargaarsa USA kan addaddaa roobse sun, jechuun "David Mercer" harra ifumatti baasee dubbachaas, barreessaas jira.
Yaa Oromoo, yaa uummata-koo abbaan fedhe, gaafa fedhe uummata keenya irratti gocha faashistummaa adeemsiseeti, amma gaddeen Ameerikaa keessa deemuun akka nama naga-qabeessa tokkootti nutti lallabaa? Akka namtichi kun yeroo ammaa USA keessa Dr. Mararaa Guddinaa wajjin deddeemee haadha isaa Toopphiyaa saniif, abbaa isaa TPLF saniif waamicha gochaa jiru torban dabre mandheedhuma tana keessatti agarree turre. Akkamitti yeroo ammaa kana, yeroo faashistoonni, lubbu-balleessitoonni fi uummata gorraatonni dachee Oroppaa fi dachee Ameerikaa irratti adamsamanii qabamuun Mana Murtii Addunyaa isa Biyya Hoolandaa, magaalaa Heeg jiruutti dhiyeeffaman, isaan nu fixan keessaa kan akka Siiyyee faa olii-gadi xayyaaraan gulufanii bashannanu? Kun yookaan raajii Waaqaa ti; yookaan daddhabbii keenya, daddhabbii Oromoota biyyambaa ("Diaspora") jirruu ti!
Dhugaa dha; nuti humna maalii, horoo daba-baaseyyii (abukaatota) beekamoo akkasiitiif barbaachisu eessaayyi finna naan jechuu dandeessu. Mee Oromoota meeqaa meeqatu biyyoota sonaan misooman kanneen akka biyyoota Oroppaa, biyyoota Ameerikaa Kaabaa fi ardii Awustiraaliyaa keessa jiraata? Isaan keessaa, nu keessaa namni gayeessi tokko mataa mataan qarshii USA takkallee yoo baase, meeqaa meeqa akka tahuu tilmaamuun nama hin rakkisu. Dubbiin tun dubbii horii otoo hin taane, dubbii seexaa, dubbii wal-ijaaruu fi dubbii kutannoo ti. Innin jedhu kun waan Siiyyee faa irratti dhaabatee hafuu miti!
Silaa Mallas Zeenaa carraan mana seeraa kun otoo isa hin dhaqqabin, gara biraatti kutee jiraa, faashistoonni Wayyaanee isaan lubbuun jiraniif waan ooluu hin qabne.
Oromoonni keenya arraba, qalamaa fi eeboo wal-irratti xiyyeeffachuu hin qabani. Kun hundumtuu gara diina uummataa fi saba keenyaatti xiyyeeffamuu qabu! Gayeen gayee dhaa, waltaanee biyyaa fi biyyee teenya harqoota gabrummaa Habashaa jalaa baasuuf haa sochoonu! Gayeen gayee dhaa, impaayerittii Toopphiyaa jedhamtu tana, ishii funyoo sibiilatiin waggaalee 130 ol nu hiitee jirtu tana ofirraa haa darbannu! Bakki impaayerittii bosobboftee tanaaf malu: Biyya Walaayitaa, Biyya Sidaamaa, Biyya Hadiyyaa, Biyya Gede'oo, Biyya Koonsoo, Biyya Kafichoo, Biyya Ogaadeen Somaalee, Biyya Afaar, Biyya Gambeellaa, Biyya Sablammiiwwan Naannoo Laga Omoo, Biyya Bertaa fi Oromiyaa faa otoo hin taane, boolla gadi-fagaatee qotame! Gayeen gayee dhaa, dursinee tokkummaa Oromoo haa ijaarrannu! Ittaansuun tumsa obbolummaa saboota kanaa olitti maqaan isaan kaafamee fi kanneen hafan, isaan akkuma keenya kolonii warra Habashaa tahanii waliin haa ijaarrannu! Kana muldhantaan ("vision") Oromoo malee, Toopphiyaan tun qaata sammuu fi onnee uummata Oromoo kan miliyoona 46-n lakkaawamuu keessaa baate. Kana deebisaniitoo sammuu fi onnee uummata keenyaa keessatti naquuf, olii fi gadi wixxirfachuun wadaroo mormatti of-kaayuu taha. Kana dursanii beekuun gamnummaa fi gameessummaa dha!
Dubbii tiyya kana guduunfuuf, yoo yaanni waayee Mana Murtii Addunyaa kun nu baasa kan jettan tahe, silaa ani tolchee nu baasan jedhaa, koreewwan dhimma kanaa irratti hojjatan bakka bakkatti haa hundeeffannu!